भन्सार बिभागको नियम परिवर्तन अब बिदेशबाट फर्किदा के के लैजान पाइन्छ के पाइदैन ? - खबर २४ अनलाईन - खबर हरपलको
भन्सार बिभागको नियम परिवर्तन अब बिदेशबाट फर्किदा के के लैजान पाइन्छ के पाइदैन ?
९ बैशाख २०७३, बिहीबार १३:०८
भन्सार विभागले विदेशबाट फर्कदा ल्याइने सामानहरुको हकमा दिने छुटमा केही परिवर्तन गरेको छ।
वैदेशिक रोजगारीको शिलशिलामा होस् या अन्य व्यक्तिगत कामको शिलशिलामा विदेश गएर फर्कदा सामान ल्याउनेहरुको हकमा केही नियम संशोधन गर्दै भन्सार विभागले नयाँ नियम लगाएको हो । केही नियममा परिवर्तन गरिएको भन्दै भन्सार विभागले अधिकांश भने पूरानै रहेको जनाएको छ । भन्सार ऐन २०६४ को दफा ९ को उपदफा ३ ले नेपालमा स्थायी बसोबास गर्ने नागरिकले विदेशबाट फर्कँदा व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि ल्याउने सामानको भन्सार शुल्क पूर्ण रुपमा छुट दिने व्यवस्था गरेको छ।
त्यस्तै लेवर चार्ज प्रतिकिलो २ रुपैयाँ ५० पैसा र ऐजेन्ट शुल्क १ रुपैयाँ देखि ५ सय रुपैयाँ सम्म महसुल तिर्नुपर्ने उनले जानकारी दिए। साथै यी बाहेक नेपाल सरकारले तोकेको सम्पूर्ण महसुल लाग्ने भन्सार कार्यालयले जानकारी दिएको छ।
Previous articleमधेसलाई होच्याए मुलुक टुक्रनसक्छः पूर्वराष्ट्रपति यादव
Next articleविद्युत् चोरी गर्ने दुई दर्जन पक्राउ